Videos | BETV Myanmar
Embedded video for UMFCCI ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းမူကြမ်း ခေတ်ကာလနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိဟုဆို
UMFCCI ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းမူကြမ်း ခေတ်ကာလနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိဟုဆို
“ လူတွေတော်တော်များများက ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြင်စေချင်ရင် လုပ်စေချင်ရင် ဘယ်က စပြောရမှန်းမသိဘူး။ သိတော့ သိတယ်။ ပြောရမှာခက်နေကြတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံသစ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာစိန်ဝင်းက ပြောသည်။
စက်တင်ဘာ (၁၄)ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ညီနောင်အသင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အသင်းဝင်များ၏ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်းမူကြမ်းအပေါ် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားတွင် ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
(သတင်းအပြည့်အစုံကို ရုပ်သံတွင် ကြည့်ရှုရန်)
Mg R’ NoE
#BETVDailyNews #Constitution(Draft) #UMFCCI
Embedded video for YCDC ၏ ၀န်ဆောင်မှုများ၌ အသုံးပြုရန် Single Window စနစ်ကို (၃)လအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်မည်
YCDC ၏ ၀န်ဆောင်မှုများ၌ အသုံးပြုရန် Single Window စနစ်ကို (၃)လအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်မည်
“ Single Window System မှာ ၀န်ဆောင်စရိတ်တွေအတွက် ပိုက်ဆံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ Mobile Banking ကနေ ပိုက်ဆံပေးနိုင် မယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်ကလည်း အဂတိမှုတွေကို ကင်းရှင်းသွားစေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက ပြောသည်။
Mg R' NoE
#BETVDailyNews #SingleWindowSystem #YCDC
(BETV ၏ နေ့စဉ်စီးပွားရေးသတင်းနှင့် အစီအစဉ်များအား Youtube Channel ၌ အမြဲမပြတ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန် http://bit.ly/betvutube အား Subscribe လုပ်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်)
Embedded video for Record l ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် စကားစမြည်
Record l ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် စကားစမြည်
မြန်မာပြည်ကို နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ပိုမိုတိုးတက်စေဖို့ရယ် ပြီးတော့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုပြီး ရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ Myanmar Global Investment Forum ကို နေပြည်တော်မှာ စက်တင်ဘာလ (၁၀-၁၁) ရက်နေ့တွေမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
Embedded video for Record lအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ခန့်ထားဖို့ နီးစပ်နေပြီလား
Record lအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေမှာ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ခန့်ထားဖို့ နီးစပ်နေပြီလား
ဒါကိုတော့ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကုန်သည်/စက်မှုအသင်းချုပ် တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခိုင်ခိုင်နွယ်ကို BETV က မေးကြည့်ထားပါတယ်။
BETV ၏ နေ့စဉ်စီးပွားရေးသတင်းနှင့် အစီအစဉ်များအား Youtube Channel ၌ အမြဲမပြတ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန် http://bit.ly/betvutube အား Subscribe လုပ်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Embedded video for ထားဝယ်-ကန်ချနာပူရီနှစ်လမ်းသွားအမြန်လမ်းလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက် မကြာမီတင်ဒါခေါ်ယူမည်
“ ထိုင်းဘက်က ငွေချေးပေးမယ့်အဖွဲ့ NEDA ( အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကူညီပေးရေးအေဂျင်စီ)နဲ့အတူ ပြန်ပြီးတော့ စိစစ်မယ်။ ပြီးတာနဲ့ ချေးငွေသဘောတူညီချက် ရယူမယ်။ ပြီးရင် ဒီဟာအတွက် စပြီးတင်ဒါခေါ်မယ်။ တင်ဒါခေါ်ပြီး တာနဲ့ လုပ်ငန်းပရောဂျက်အမြန်ဆုံးစဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင့်ထွန်းနိုင်က ပြောသည်။
#BETVRecord #Dawei_SEZ #Road_Project #ITD
Embedded video for ဘဏ်အတိုးနှုန်းကို ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်အထိ ဖြေလျှော့ပေးသွားမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌပြော
ဘဏ်အတိုးနှုန်းကို ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည်အထိ ဖြေလျှော့ပေးသွားမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌပြော
ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များအနေဖြင့် မိမိမူဝါဒအရ အတိုးနှုန်းများကို လွတ်လပ်စွာသတ်မှတ်နိုင်သည့် အခြေအနေရောက်ရှိစေရန် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမင်းက ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် (၁၃) ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
#BETVDailyNews #Central_Bank_of_Myanmar #Bank_Rate
Embedded video for Record | OTC Market မဟုတ်တဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ စုပြီး Second Board တည်ထောင်မယ့်ကိစ္စ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်ပြီလဲ?
Record | OTC Market မဟုတ်တဲ့ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတွေ စုပြီး Second Board တည်ထောင်မယ့်ကိစ္စ ဘယ်အခြေအနေ ရောက်ပြီလဲ?
“ ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ(FSA) နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် (SECM) နဲ့ ညှိနေတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်” ဟု SECM အဖွဲ့ဝင်၊ ဦးဌေးချွန်က ပြောသည်။
#BETVRecord #Second_Board #SECM #YSX
BETV ရဲ့ စီးပွားရေးသတင်းနဲ့ အစီအစဉ်များအပြင် အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အစီအစဉ်များကို နေ့စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန် Youtube Channel ဖြစ်သည့် http://bit.ly/betvutube ကို လုပ်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
Embedded video for SME Development Bank ၏ JICA Two-Step-Loan ကို ကယားနှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင် ထုတ်ချေးမည်
SME Development Bank ၏ JICA Two-Step-Loan ကို ကယားနှင့် ချင်းပြည်နယ်များတွင် ထုတ်ချေးမည်
SME JICA Two Step Loan ချေးငွေကို ဖွံဖြိုးမှု အားနည်းနေသေးသည့် ကယားပြည်နယ်နှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် ထုတ်ချေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း SMID Bank ၏ CEO ဦးဇေယျညွှန့် က စက်တင်ဘာလ(၄) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကိုးရီးယားနိုင်ငံရှိ Industrial Bank of Korea (IBK) ဘဏ် နှင့် နားလည်မှု စာချွှန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Phyo Pyae pyae Khin
#BETVRecord #SMIDBank #JICATwoStepLoan #SME
Embedded video for Industrial Bank of Korea(IBK) မှ SME Development Bank အား နည်းပညာအကူအညီပေးမည်
Industrial Bank of Korea(IBK) မှ SME Development Bank အား နည်းပညာအကူအညီပေးမည်
ပြည်တွင်း အသေးစားအလတ်စား (SME) လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံ Industrial Bank of Korea(IBK) မှ SME development Bank အား နည်းပညာအကူအညီပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုကဲ့သို့ ကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာလ (၄) ရက်နေ့၊ Lotte Hotel တွင် SME – Development Bank မှ CEO ဒေါက်တာ ဇေယျာညွှန့် နှင့် IBK ဘဏ်မှ Chairman & CEO ဖြစ်သည့် Mr.Kim Dojin တို့မှ နားလည်မှု စာချွှန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
#BETVRecord #SME_Development_Bank #IBK
Embedded video for ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားမှု ဗဟိုဘဏ်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ပြည့်ဝစွာ ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဆို
ဗဟိုဘဏ်ဒုဥက္ကဋ္ဌ လွှတ်တော်တွင် ဖြေကြားမှု ဗဟိုဘဏ်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ပြည့်ဝစွာ ကိုက်ညီမှုမရှိဟုဆို
ဗဟိုဘဏ်၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၏ ဖြေကြားချက်အပေါ် ဗဟိုဘဏ်၏ ရပ်တည်ချက်နှင့် ပြည့်ဝစွာ ကိုက်ညီမှုမရှိဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပတ်သတ်၍ BETV မှ ဗဟိုဘဏ်ဒုတိယ ဦးစိုးသိန်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း သတင်းမီဒီယာသို့ ဖြေကြားလိုစိတ်မရှိကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
#BETVDailyNews #Pyithu_Hluttaw #Central_Bank_Myanmar #Commercial_Loan
Embedded video for Ready ငါးသေတ္တာလုပ်ငန်းရှင် ဦးမိုးမြင့်ကျော်နှင့် သီးသန့် မေးမြန်းခန်း
Ready ငါးသေတ္တာလုပ်ငန်းရှင် ဦးမိုးမြင့်ကျော်နှင့် သီးသန့် မေးမြန်းခန်း
"ကျွန်တော် အကောင်းမြင်တာက ကျွန်တော့်လုပ်ငန်းက ကောင်းနေလို့ပါ"
Embedded video for ချေးငွေကိစ္စ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Omni Focus ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်နေ၀င်းနဲ့ သီးသန့်မေးမြန်းခန်း
ချေးငွေကိစ္စ တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Omni Focus ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်နေ၀င်းနဲ့ သီးသန့်မေးမြန်းခန်း
အပိုင်း (၂) အား ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
"Day 1 ကတည်းက ကျွန်တော်တို့ ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် Zero Down Payment။ ကျွန်တော်တို့ (၇) နှစ် လိုချင်တယ်။ သူတို့ လက်ခံလို့ အဲဒိမှာ ချေးခဲ့တာ" ဆိုပြီး Omni Focus ဥက္ကဌ ဦးကျော်နေ၀င်းက BETV ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
#Exclusive_Interview #Omnifocus #Aya_Bank
BETV ၏ နေ့စဉ်စီးပွားရေးသတင်းနှင့် အစီအစဉ်များအား Youtube Channel ၌ အမြဲမပြတ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန် http://bit.ly/betvutube အား Subscribe လုပ်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ Omni Focus General Services Public Co.,Ltd ကို Foton ဘတ်(စ)ကားတွေ ၀ယ်တုန်းက ချေးထားတဲ့ ချေးငွေတွေ ပြန်မပေးလို့ဆိုပြီး ဧရာဝတီဘဏ်က တရားစွဲဆိုထားတဲ့ သတင်းတွေ မကြာခင်က ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ Omni Focus က ဥက္ကဌ ဦးကျော်နေ၀င်းကို BETV က သီးသန့် မေးမြန်းထားပါတယ်။
အပိုင်း (၁) ကို ဒီနေ့ ည (၈) နာရီမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတဲ့အခါ အပိုင်း (၂) ကိုတော့ နောက်ထပ် မိနစ် (၃၀) ကြာတဲ့ အချိန်မှာ ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Embedded video for စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းအောင်နှင့် သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပိုင်း (၂) ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးဝင်းအောင်နှင့် သီးသန့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း အပိုင်း (၂) ဖြစ်ပါသည်။
ဒီအစီအစဉ်မှာ ခရိုနီဆိုတဲ့ စကားလုံးအပေါ် ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါသလဲ?
NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ ဦးဝင်းအောင်ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေ...ပြီးတော့မြန်မာ့စီးပွားရေးအပေါ် အစိုးရရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲ?
စတဲ့ စတဲ့ မေးခွန်းများစွာကို UMFCCI ဥက္ကဌဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်သလို မြန်မာသီလ၀ါအက်(စ)အီးဇက်ဟိုးဒင်းပတ်ဘလစ်လီမိတက် ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးဝင်းအောင်က ဖြေကြားပေးထားပါတယ်။
Embedded video for MTSH ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
MTSH ဥက္ကဌ ဦးဝင်းအောင်နှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
Embedded video for #CEO_Interview - ရပ်ကွက်ထဲက တရားမ၀င်ငွေချေးသူတွေကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
#CEO_Interview - ရပ်ကွက်ထဲက တရားမ၀င်ငွေချေးသူတွေကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
ရပ်ကွက်ထဲက တရားမ၀င်ငွေချေးသူတွေကို တရားဝင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ဘာလုပ်သင့်သလဲ?
Thitsar Works Solution က CEO ဦးညီငြိမ်းအေးကို BETV က မေးမြန်းထားပါတယ်။
(Thitsar Works ဆိုတာက မြန်မာပြည်သူတွေ တရားဝင်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ပါဝင်နိုင်ဖို့ နည်းပညာနဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထောက်ပံ့ ၀န်ဆောင်ပေးနေတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်)
#CEO_Interview #Microfinance #Thitsarworks #illegalmoneylender
Embedded video for ရွာသာကြီး-အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ စီမံကိန်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်မှ CEO ဦးသူရိန်အောင်နှင့် စကားစမြည်
ရွာသာကြီး-အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သတ်၍ စီမံကိန်းအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည့် ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်မှ CEO ဦးသူရိန်အောင်နှင့် စကားစမြည်
ယခုမှစ၍ အချိန် (၄) နှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်သွားမည့် ရွာသာကြီး-အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန်စီမံကိန်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ကျရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ဒဂုန်အင်တာနေရှင်နယ်လီမိတက်မှ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် (CEO) ဖြစ်သူ ဦးသူရိန်အောင်အား စီမံကိန်းပုံစံ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဘိုးပမာဏ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးနိုင်မှုစသည်တို့ကို ဒီအစီအစဉ်မှာ မေးကြည့်ထားပါတယ်။
(အပြည့်အစုံကို ရုပ်သံတွင် ကြည့်ရှုပါ)
#BETVDailyNews #Eastdagonindustrialzone #Dagoninternational #JFE #MIC
Embedded video for မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အငြိမ်စား ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အငြိမ်စား ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Embedded video for မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အငြိမ်စား ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း(၂)
မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် အငြိမ်စား ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း အပိုင်း(၂)
Embedded video for Business Bees l တညင်းသီးအစားထိုး မျောက်ငိုသီးလုပ်ငန်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်နေသူ ဦးကျော်မင်းနိုင်
Business Bees l တညင်းသီးအစားထိုး မျောက်ငိုသီးလုပ်ငန်းကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်နေသူ ဦးကျော်မင်းနိုင်
ဦးကျော်မင်းနိုင်ဟာ Myanmar Kyaw စားသောက်လုပ်ငန်းကို တည်ထောင်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးပါ။ ကော့သောင်းမြို့မှာ ဆန်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာကနေ တညင်းသီးအစားထိုး မျောက်ငိုသီးဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ လုပ်ငန်းကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် မျောက်ငိုသီးဆိုတာ ဘာလဲ? ဒီလုပ်ငန်းကို ဦးကျော်မင်းနိုင်တစ်ယောက် ဘယ်လို အောင်မြင်အောင် လုပ်ကိုင်သွားမလဲဆိုတာ ဒီနေ့ညရဲ့ Business Bees (ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ငန်းရှင်များ) အစီအစဉ်မှာ တင်ဆက်ပေးသွားပါ့မယ်။
#Biz_Bees #Myaukngothee #Friday7pm
Embedded video for Business Bees l လီလီပန်းမျိုးဥများ တင်သွင်းပြီး ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူ မမြသွေးရည်
Business Bees l လီလီပန်းမျိုးဥများ တင်သွင်းပြီး ကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချနေသူ မမြသွေးရည်
ဒီနေ့ညရဲ့ Business Bees (ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ငန်းရှင်များ) အစီအစဉ်မှာတော့ FMK Business Support ကို တည်ထောင်သူ မမြသွေးရည်ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
#Business_Bees #FMK #Friday7pm
(BETV ၏ နေ့စဉ်စီးပွားရေးသတင်းနှင့် အစီအစဉ်များအား Youtube Channel ၌ အမြဲမပြတ်ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုရန် http://bit.ly/betvutube အား Subscribe လုပ်ထားဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်)
Embedded video for Business Bees l မြန်မာ့ရာဘာကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဈေးနှုန်းရရှိအောင် ကြိုးစားနေသူ
Business Bees l မြန်မာ့ရာဘာကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ဈေးနှုန်းရရှိအောင် ကြိုးစားနေသူ
"စိုက်ပျိုးရေးကတော့ အနာဂတ်ကို ပြောရတာ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့က နိုင်ငံတကာနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ပြီး ကမ္ဘာ့ပေါက်ဈေးနီးပါး ရဖို့က ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ် မျှော်လင့်ချက်ပဲ။ သိပ်မကြာတော့ဘူးလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်"
Embedded video for Business Bees l မအိပိုးဖြူရဲ့ တန်ဘိုးမြင့် ရွှေဇီးကွက် ချဉ်ပေါင်သီးဖျော်ရည်
Business Bees l မအိပိုးဖြူရဲ့ တန်ဘိုးမြင့် ရွှေဇီးကွက် ချဉ်ပေါင်သီးဖျော်ရည်
"အစ်မတို့ SME တွေမှာ ကိုယ်မှားနေတာကို အတင်းလက်ကိုင်ထားပြီး ရှေ့မရောက်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့တင် ပင်ပန်းပြီး လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေရင်းနဲ့ နောက်ဆုံး ပျောက်သွားတာတွေ ရှိတယ်" ဆိုပြီး ပြောပြလာသူက ရွှေဇီးကွက် စားသောက်ကုန်နဲ့ ဖျော်ရည်လုပ်ငန်း တည်ထောင်သူ မအိပိုးဖြူပါ။
Embedded video for Business Bees l မြန်မာ့နည်းပညာကို ကမ္ဘာကနေ သင်ယူရမယ် ၀ယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာချော
Business Bees l မြန်မာ့နည်းပညာကို ကမ္ဘာကနေ သင်ယူရမယ် ၀ယ်ယူရမယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဥမ္မာချော
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာချောဟာ ရွှေသုန္ဒရီမြန်မာ့ရိုးရာသနပ်ခါးလုပ်ငန်းရဲ့ ဦးစီးတည်ထောင်သူ အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ပါ။
Embedded video for မြို့တော်ကော်မတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုအောင်ခန့်နှင့် BETV Interview
မြို့တော်ကော်မတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုအောင်ခန့်နှင့် BETV Interview
လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နေရာတောင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ မြို့တော်ကော်မတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုအောင်ခန့်နှင့် BETV Interview
Embedded video for ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် တိုင်းအစိုးရက ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေလဲ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့သူတွေအတွက် တိုင်းအစိုးရက ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေလဲ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ အိမ်ပိုင်မရှိသူတွေအတွက် တိုင်းအစိုးရက လုပ်ဆောင်နေတာတွေကို လူမှုရေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးညီညီ က အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။
Embedded video for &amp;quot;လုပ်ငန်းရှင်များ လက်ရှိဒေါ်လာပေါက်ဈေးနှင့် ငွေပြန်ဝင်နိုင်မည့်အချိန်ကို မှန်းဆရန် ခက်ခဲ&amp;quot;
"လုပ်ငန်းရှင်များ လက်ရှိဒေါ်လာပေါက်ဈေးနှင့် ငွေပြန်ဝင်နိုင်မည့်အချိန်ကို မှန်းဆရန် ခက်ခဲ"
ယနေ့ ဒေါ်လာငွေဈေးမြင့်တက်နေမှုအပေါ် ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင် ဦးနေလင်းဇင်၏
Embedded video for တညင်းကုန်းဈေးဟောင်း အပြီးသတ်ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် မြို့တော်ဝန်ထံ ထပ်မံတင်ပြသွားမည်
တညင်းကုန်းဈေးဟောင်း အပြီးသတ်ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် မြို့တော်ဝန်ထံ ထပ်မံတင်ပြသွားမည်